Sọpụrụ 20 na -enweta mmelite ọhụrụ | Androidsis
N’ọnwa Mee nke afọ a, Honor bidoro mmemme ya Sọpụrụ usoro flagship 20Ngwaọrụ abụọ a, kemgbe ahụ, abanyela klọb asọmpi nke kacha achọ ahịa n'ahịa, nke a bụ n'ihi njirimara na nkọwa teknụzụ nke ha. na -etu ọnụ.
Companylọ ọrụ ahụ, n'ezie, na -enye ha mmelite ngwanrọ oge niile, nke ikpeazụ ruo ugbu a bụ nke anyị na -ekwu maka ya n'okpuru, nke, ọ dị ka ọ na -amalite iru Na-asọpụrụ 20 ọ bụghịkwa nwanne ya nwoke nke tọrọ ya, n'agbanyeghị na n'oge na-adịghị anya ọ ga-enwetakwa OTA kwesịrị ya nke ọma.
Onye ọrụ sachin k.v. (@ sachin109) nke Twitter mere ọkwa na nso nso a nke o mere ka amara ya, site na nseta ihuenyo abụọ, nke ahụ Sọpụrụ 20 na -enweta ụdị anwansi UI 9.1.0.142 2.1 na India. Nke a eyighị ka ọ na -eme mgbanwe ndị bụ isi, mana ọ na -anya isi nke ukwuu, nke bụ 4.16 GB.
New # Sọpụrụ20 Mmelite na nchekwa nchekwa July. @HiHonorIndia @Honorglobal @HuaweiIndia @fonearena @gizmochina @xdadevelopers @Gizchina pic.twitter.com/ZgyVgczxzA
- sachin kv (@ sachin109) August 22, 2019
Dị ka nke a, n'agbanyeghị na anaghị etinye atụmatụ ọhụrụ, ngwugwu firmware ọhụrụ nke Sọpụrụ 20 kwesịrị ka ọ bịarute melite nkwụsi ike nke sistemụ, gbakwunye patch nchedo nke ọnwa Julaị afọ a, ma dozie ọtụtụ obere ahụhụ. Nke a bụ mmelite oge niile. Agbanyeghị, ị kwesịrị ị na -achọpụta ọfụma na ọsọ dị mma na ngwaọrụ n'ihi nke a.
Ịtụle àgwà ekwentị a ntakịrị, ekwesịrị ịmara na ọ nwere ihuenyo IPS LCD diagonal 6.26-inch nwere mkpebi FullHD + nke pikselụ 2,340 x 1,080, ihe nhazi. Kirin 980, 6 GB Ram, ebe nchekwa 128 GB na batrị ikike 3,750 mAh nwere nkwado maka chaja ngwa ngwa nke 22.5 watts, nke na -enye gị ohere ịkwụ ụgwọ ya site na 0% ruo 50% n'ime naanị nkeji iri abụọ na anọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Sọpụrụ 20 ọkọkpọhi emelitere na July nche kwachie na usoro kwụsie ike ndozi